बिष्णु माझी सार्वजनिक नहुनु र उनको अर्को फोटो नबन्नुको कारण यस्तो रहेछ – Krazy NepaL
April 9, 2021 811
काठमाण्डौ । देशकै चर्चित गायिका कुनै सञ्चार माध्यममा छाउँदिनन् न त देश विदेशको कन्सर्टमै देखा पर्छिन् । यो हविगत कसले बनायो ? झण्डै साढे ५ हजार गीतमा स्वर भरिसकेकी र दशकभन्दा बढी समयदेखि लोकगायनमा जमेकी विष्णुको जीवन गुमनाम कसले बनाइरहेछ ? उनको साढे ५ हजारभन्दा बढी गीत भेटिने ठाउँमा किन एउटै मात्र फोटो प्रयोग भइरहेको छ ?
सांगीतिक क्षेत्रका लागि उर्वर भूमि स्याङ्जामा जन्मिएकी हुन् विष्णु । त्यही ठाउँमा जन्मिएका चर्चित गायक छन् बद्री पंगेनी, एकनारायण भण्डारी, भगवान् भण्डारी, रामजी खाँडलगायत । सांगीतिक फाँटमा चलिरहेको चर्चाअनुसार विष्णुलाई आफ्नै श्रीमान् सुन्दरमणि अधिकारीले बन्धकजस्तै बनाएका छन् । उनीसँग निर्णयको केही अधिकार छैन । सबै ठाउँमा सुन्दरमणि हाबी भइदिन्छन् ।
दुई तीन घण्टा स्टुडियोमा रहँदा बाहिर सुन्दमरणि कुरिरहन्छन् र गीत गाइसकेपछि पारिश्रमिक बुझेर हिँड्ने गरेको उनीसँग गीत गाउने गायक तथा संगीतकार सुनाउँछन् । अर्थात् उनको जीवनमा स्वतन्त्रता भन्ने वस्तु नै खोसिएको छ । यस्तो लाग्छ, सास फेर्नसमेत विष्णुले सुन्दरमणिसँग अनुमति माग्नुपर्छ । यद्यपि, केही महिनाअघि स्याङ्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पति सुन्दरमणिसँगै पुगेकी विष्णुले आफैं बाहिर निस्कन नचाहेको जवाफ दिएकी थिइन् ।
Prevछिन छिनमा थकान महशुस हुन्छ ? हुनसक्छ प्रोटिनयुक्त खानाको कमी !